हिरासतमा महराका तीन दिन : न नेता-कार्यकर्ता भेट्न आए, न टीका लाए - VOICE OF NEPAL
हिरासतमा महराका तीन दिन : न नेता-कार्यकर्ता भेट्न आए, न टीका लाए
२२ आश्विन २०७६, बुधबार १३:१६
117 ??? ???????
देशभर उमंगका साथ दसैं मनाइरहँदा महाअष्टमी (आइतबार) साँझ कृष्णबहादुर महरा भने प्रहरी हिरासतमा पुगे ।
त्यसो त विभिन्न कसुरमा दैनिक रुपमा थुप्रै आरोपित पक्राउ पर्छन् र प्रहरी हिरासतमा पुर्याइन्छन् । तर, महराको चर्चा भने बढी हुन पुग्यो । कारण– महरा निवर्तमान सभामुख हुन् र बहालवाला सांसद । संसद् सचिवालयकै एक कर्मचारीमाथि यौन दूराचारको आरोप लागेपछि उनले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, सभामुखको सरकारी निवास छाडेका थिएनन् । आरोप लागेको एक सातापछि आइतबार प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । दुई दिन अघिमात्र उनीमाथि उजुरी परेको थियो ।
दसैंको भोज चलिरहँदा आइतबार साँझ महरालाई लिन निवासमा पुग्यो प्रहरी । सोही दिन अदालतले महरालाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको थियो । प्रहरीको गाडीमा बस्न अस्वीकार गरेका महरा आफ्नै गाडीमा बसेर सिंहदरबारस्थित प्रहरी वृत्तमा पुगे । तीन दिनदेखि उनी त्यहीँको थुनुवा कक्षमा छन् । अदालतमा दसैं बिदा भएकाले महरालाई २८ गतेमात्रै अदालतमा पेश गरिनेछ । दसैंको दोस्रो दिनमा पक्राउ परेका महराको पूरै दसैं हिरासतमै बित्नेछ ।
महरालाई सिंहदरबार वृत्तको एक छुट्टै कोठामा राखिएको छ । ‘सिनियर अभियुक्त’ पक्राउ पर्दा त्यहीँ राखिँदै आएको छ । प्रहरीका अनुसार महरा उच्च रक्तचापका बिरामी भएकाले कोठामै अक्सिजन राखिएको छ । उनले आवश्यक परेको बेला अक्सिजन लिने र सहज भएको बेला झिक्ने गरेका छन् । महरालाई चिकित्सकको टोलीले थुनुवा कक्षमै आएर चेकजाँच गर्छ । उनलाई भेट्नका लागि परिवारका सदस्यबाहेक अरु कोही आएका छैनन् । एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘‘नेकपाका कोही नेता–कार्यकर्ता भेट्न आएका छैनन् । परिवारका सदस्य र आफन्त भने बेलाबेला आउने गरेका छन् ।’’
महराले प्रहरी हिरासतमा रहेको बेला परिवारका सदस्यसँग दसैंको टीकासमेत लगाएनन् । कहिले आफन्तले ल्याइदिएको खानेकुरा खाइरहेका छन् भने कतिपय अवस्थामा प्रहरीकै मेसमा पाकेको खानेकुरा पनि खान्छन् ।
वजेटले समेटेका ३० मुख्य क्षेत्र: कुन क्षेत्रमा कति वजेट ?
नेपालमा पाँचौ कोरोना संक्रमितको मृत्यु , शव व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले लिने
हिडेरै नेपाली सीमामा पुगेका नेपाली भोकभोकै ५ दिनदेखि भारतको ओढारमा बस्न बाध्य